dalka Japan oo ku dhawaaqay xaalad degdeg ah coronavirus Awgii – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA dalka Japan oo ku dhawaaqay xaalad degdeg ah coronavirus Awgii
Tokyo, Japan – Raiisel wasaaraha Shinzo Abe ayaa ku dhawaaqay xaalad deg-deg ah hal bil ah oo laga jawaabayo tirada degdegga ah ee sii kordheysa ee cudurada coronavirus ee magaalooyinka waaweyn, in kasta oo aan dadku lagu qasbi karin inay joogaan guryo ama meheradaha lagu qasbo inay xiraan.
Baaqa Talaadada wuxuu ka hadlayaa Tokyo iyo seddex maamul oo ku wareegsan, iyo sidoo kale Osaka, Hyogo, iyo Fukuoka.
Waxaa la socon doona 108 tiriliyan yen ($ 990bn) oo lacag ah, oo matalaya ilaa 20 boqolkiiba waxsoosaarka guud ee gudaha (GDP), in kastoo qaar ka walaacsan yihiin in gargaarka maaliyadeed uu si dhakhso leh ugu imaan doono.
“Waa inaan sameynaa wax walba si aan uga ilaalino xarumaha caafimaadka inay noqdaan kuwa culeys badan, haatan waxay ku dhow yihiin awood,” ayuu yidhi Abe xilli uu khudbad u jeedinayay qaranka.
“Haddii aan ku yareyn karno xiriirka ka dhexeeya qof-ka-qof 70 ama 80 boqolkiiba, caabuqyadu waxay gaarayaan heerkooda ugu sarreeya laba toddobaad gudahood,” ayuu yidhi Abe, kaasoo ku baaqay in la dhimo boqolkiiba 70 dadka ku shaqo taga.
Noocan qufulka ah ee lagu arko waddamada kale ma ahan suurtagal sababtoo ah awoodaha dowladda ee lagu xakameeyo dadka waxaa xaddidaya dastuurka, kaas oo si wax ku ool ah u soo rogay Japan Mareykanka Dagaalkii Labaad kadib.
Xoriyadda isu imaatinka iyo isu imaatinka waa la dammaanad qaaday, sidoo kale doorashada xorta ah ee degenaanshaha, “illaa iyo inta aysan faragalin ku sameynaynin daryeelka bulshada”.
Ereyga “daryeelka bulshada” ma laha qeexitaan cad oo kujira dukumintiga, wuxuu tilmaamay Osamu Nishi, oo ah borofisar ku xeel dheer sharciga dastuurka ee Jaamacadda Komazawa ee Tokyo, in kasta oo uu u arko xaaladda hadda jirta inay buuxineyso shuruuda.
Nishi, oo ah aqoonyahan hormuud ka ah dastuurka ayaa yidhi “Xaaladda degdegga ah ee xaaladdu waa mid dhammaystiran oo dastuuri ah. “Laakiin codsiyada iyo tilmaamaha kaliya ayaa la siin karaa muwaadiniinta, ma aha amarro; laguma qasbi karo inay u hoggaansamaan.”
Guddoomiyaha magaalada Hokkaido, jasiiradda ugu weyn waqooyiga Japan, ayaa qaaday go’aan deg deg ah ka dib markii ay noqotay goobta ugu weyn ee ugu weyn ee qaranka waxayna ku dhawaaqday xaalad degdeg ah 28-kii Febraayo.
In kasta oo aan lahayn wax sharci ah, haddana muwaadiniintu way ka fiirsadeen jasiiraduna waxay awoodday inay qaaddo tallaabooyinkaas markay ahayd Maarso 19.
Hokkaido ma soo sheegin wax kiisas cusub ah labadii maalmood ee lasoo dhaafay. Inta badan dadka uu cudurku ku dhacay ayaa hadda soo kabsaday, jasiiradduna waxay diiwaan gelisay sagaal dhimasho oo keliya marka loo eego dadka ku nool 5.3 milyan.
Si ka duwan inta badan Japan, maamulka jasiiradda wuxuu sameeyay baaritaano badan.
Yoko Tsukamoto, oo ah borofisar ku takhasusay cudurada faafa oo ka tirsan Jaamacadda Sayniska Caafimaadka ee Hokkaido ayaa yidhi. “Tijaabooyinka orodka waa furaha.”
Tsukamoto wuxuu walaac ka muujiyey in dowladda dhexe ay muddo dheer sugaysay inay ku dhawaaqdo xaalad degdeg ah lagana yaabo inay bixiso qiimahaas.
Waxay sheegtay in nidaamka caafimaadka ee caasimada uu qatar ugu jiro in laga adkaado hadii “tirada kiisaska cusub ay kujirto seddex lambar maalin walba”, tirooyinka Tokyo ayaa isdiiwangashanaa ilaa usbuuca dhamaadkiisa.
Tsukamoto, oo ah gudoomiyaha degmada Tokyo ayaa sheegay in ay jiraan ilaa 1000 sariirood oo loogu tala galay bukaanka cudurka coronavirus, laakiin ay jiraan tiro intaas la eg. ku saabsan tirada shaqaalaha caafimaadka ee cudurka ku dhacay.
Afartan iyo afartan shaqaale oo ka tirsan Isbitaalka guud ee Eiju Tokyo ee Tokyo ayaa cudurka qaba, halka 18 dhakhaatiir hoose oo Cisbitaalka Keio University Cisbitaalka lagu dhigay astaamaha Coronavirus ka dib markii 40 ka mid ahi ay wada qadeeyeen, inkasta oo ay soo noqnoqdeen digniino ku saabsan in laga fogaado isu imaadyada noocaas ah.
Ku dhawaaqista xaaladda degdegga ah ayaa qeybaha waaweyn ee dhaqaalaha u keenaya istaagid ganacsi isla markaana ganacsatada yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ahba waxay ka walaacsan yihiin 2 milyan ee yuuro ($ 1,836) ee deeqaha dawladdu si dhaqso leh uguma imaan si loo badbaadiyo.
Tokyo waxay hoy u tahay qiyaastii 160,000 oo meelaha wax lagu cunteeyo, iyo kumanaan kun oo kale oo ka tirsan gobollada ku xeeran. Kuwa badan oo kuwan ka mid ah waa kuwa yaryar, baararka ay dadku ku shaqeeyaan iyo maqaayado ka badbaada bilo-bil-wayna waxaana ugu adkaan doonta khasaaraha ganacsi ee soo kordha.
Mid ka mid ah aasaasidaas waa maqaayadda Isbaanishka ee Los Bacos oo ku taal agagaarka Kawasaki, oo koonfurta ku taal Tokyo.
“Waxaan ka fikirayaa in aan sii socon doono maalmo yar oo aan arko waxa dhaca, haddii ay macmiilku yimaaddo iyo in kale. Waxaan sidoo kale la hadli doonaa milkiilayaasha baararka kale iyo makhaayadaha halkan ku yaal,” ayuu yidhi milkiilaha shirkadda chef Nobuaki Motodate , oo ku noolaa Spain si uu u barto farshaxanimadiisa ka hor inta uusan furin Los Bacos.
“Wadanku wuxuu ku jiraa xaalad adag waxaanan rabaa inaan sameeyo waxa saxda ah, laakiin waxaan u baahanahay inaan noolaado. Bil kama xirna. Waxaan ku qasbanahay inaan aado bangiga oo aan lacag weydiisto. Waxaan u malaynayaa badiyaa Cunnooyinka yar yar ee la cuno waxay ku jiraan xaalad isku mid ah, ”ayuu yidhi Motodate.
“Dowlada waxaa laga rabaa inay bixiso taageerada, laakiin waxaa jiri doona waraaqo fara badan waqti badana way qaadan doontaa. Taasi waa sida ay waxku usocdaan Japan,” ayuu raaciyay. “Haatan, waa inaan isku dayaa oo aan gashado waji geesinimo ah.”
Previous articleSaynisyahano ku sugan Australia ayaa sheegay inay heleen daawo 48hours ku Dileysa coronavirus
Next articleOgeysiis Dhakhtar: ma iska ilaalin kartaa cudurka coronavirus? iyo habka ugu fiican
Dad Shacab ah oo Argagixisada Alshabaab kula dagaalamay Gobolka Bakool ”...
Faah faahin:dil ka dhacay Muqdisho